'Hacking Team' သည်သင်၏ iPhone ကို Jailbreak နှင့်ထိုးဖောက်နိုင်သည် ငါက Mac ပါ
'Hacking Team' သည်သင်၏ iPhone ကို Jailbreak ဖြင့်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်
ယရှေု Arjona Montalvo | | iPhone ကို, NOTICIAS, အတော်ကြာ
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ 'ဟက်ကာအဖွဲ့ ' ယခုအပတ်ဒေတာချိုးဖောက်မှုကြုံတွေ့ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏ 400 GB သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများသည် 'Hacking Team' ၏စွမ်းရည်ကိုအတည်ပြုသည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသောအိုင်ဖုန်းများကိုထိန်းချုပ်ပါ.
iPhone ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို hack ရန်အတွက်၎င်းတွင်တပ်ဆင်ရန်လိုလိမ့်မည် jailbreak လုပ်ထားတဲ့ iPhoneဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီမှာရှိပါတယ် jailbreak နှင့်ကူးစက်နိုင်စွမ်း စိတ်ချရသော malware အဖွဲ့မှတဆင့် ၄ င်း၏ဆော့ဝဲလ်ပါသောဖုန်းတစ်လုံး။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Kaspersky Lab မှ y နိုင်ငံသားဓာတ်ခွဲခန်း, 'Hacking Team' ၏ကိရိယာများနှင့်၎င်းတို့အသုံးပြုခဲ့ပုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် အစိုးရအေဂျင်စီများ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်၊ သို့သော်ဆော့ဖ်ဝဲကိုယခုအချိန်အထိအတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
'Hacking Team' ဆိုတာက Apple ကတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးလက်မှတ်၎င်းသည် jailbreak ပြုလုပ်ထားသော iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်တွဲဖက်ပြီး Device များတွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သောဆော့ဝဲလ်ကိုကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သည် iOS app ကိုတပ်ဆင်ခြင်းကာကွယ်မှုကိုရှောင်ကွင်း။ ထို့အပြင် 'Hacking Team' သည်အန္တရာယ်ရှိသော application တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုတီထွင်ခဲ့သည် keystrokes များကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း software ကို install လုပ်ပါ.
IOS အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် jailbreak ပြုလုပ်ထားသော iPhone နှင့် iPads များတွင်ပါဝင်နိုင်သည့်အားနည်းချက်များရှိနိုင်သည် စကားဝှက်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ အီးမေးလ်များစသဖြင့်
'Hacking Team' ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုတိုက်ခိုက်ရန်တိုက်ခိုက်သည် တစ် ဦး ချင်းစီ devices များအစားကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်ကို။ ယိုစိမ့်နေသော 'Hacking Team' စာရွက်စာတမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် အနာဂတ် iOS ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ပင်၌ Mac software ကို update.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iPhone ကို » 'Hacking Team' သည်သင်၏ iPhone ကို Jailbreak ဖြင့်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်
Office 2016, OS X El Capitan ၏ beta အသစ်၊ Apple Watch အရောင်းနှင့်အခြားများစွာတို့ဖြစ်သည်။ SoydeMac တွင်တစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး